Indlela yokwenza inkwenkwe ithandane | Amadoda aseStylish
UAlicia tomero | 29/10/2021 20:34 | Ukunyamekela, Isibini kunye nokwabelana ngesondo
Enjani imvakalelo entle yiba sothandweni kwaye uzive ubuyiselwa. Ukuba uthathe isigqibo sokuya kuyo yonke into kwaye ucinga ukuba ngumsebenzi onzima, akufanele uphose ithawula. Ukuba ucinga ukuba akukho kukufikelela kwakho kwaye uthathe isigqibo sokuhlehla, ngoko awuyi kufumana nto. Kuya kufuneka ugcine loo nkohliso kwaye wazi indlela yokwenza inkwenkwe ithandane.
Kodwa ukuba uthatha isigqibo sokumenza abe sempilweni ngazo zonke iindlela, kuya kufuneka ubeke yonke imizamo yakho kwaye ziveze njengoko unjalo, ukuze kungabikho nkohliso. Ukuba awunangqondo unako khangela elinye iqhinga, Kodwa ukuba uzama ukumfumana ngokuzenza isazisi sakho, ukusuka apha sincoma ukuba ayisiyiyo eyona ndlela ilungileyo.
1 Zinakekele kwaye unike ukubaluleka kumzimba kunye nempilo yakho
2 Ngalo lonke ixesha gcina ii-vibes ezilungileyo kwaye uncume rhoqo.
3 Ngalo lonke ixesha ujonge ukusondela ukwenza inkwenkwe ithandane
4 Bonisa okwakho ukuzimela
5 Fumana kancinane ngobuntu babo
Zinakekele kwaye unike ukubaluleka kumzimba kunye nempilo yakho
Lo ngumbono wokuqala kunye neyona nto ibaluleke kakhulu, nangona kubonakala ngathi ikhohlakele, wonke umntu ujonge kuqala kumzimba womntu. Kodwa kude kuyo yonke le nto nokuba unawuphi na umzimba, yaye akuyomfuneko ukuba ibe yeyona igqibeleleyo.
Mayibe umbono omnandi wokuqala, zibonakalisa umzimba olungiswe kakuhle, ongenazintsilelo okanye ubuvila. Umzekelo ngu a iinwele zilungiswe kakuhle kwaye zilungisweUkuba umzimba wakho ubonakalisa ucoceko lobuqu olulungileyo, nokuba nesiqhumiso esincinci silungile. Ukuba usebenzisa i-makeup ungayisebenzisi kakubi, sebenzisa eyona yendalo. Xa unxiba kufuneka ube yindalo kwaye uhlale unayo iimpahla ezicocekileyo, ezi-ayinweyo kwaye azikho scruffy. Ukuba unazo naziphi na iimpawu zomzimba onokuthi uziqaqambise, ungayenza ngokunxiba iimpahla ezihexayo, kodwa ngaphandle kokulayisha kakhulu inkangeleko.
Ngalo lonke ixesha gcina ii-vibes ezilungileyo kwaye uncume rhoqo.
Njalo uncumo oluhle ngathi kwaye akukho mfuneko yokuba wenze umzamo omkhulu. Ukubona umntu encuma ngokwendalo kunika ukuzithemba kwaye iya kudala ukufikeleleka okukhulu kunye noqhagamshelwano phakathi kwabantu ababini.
Olunye lweempawu ezithandwa ngamakhwenkwe kukubona intombazana enobubele nesondeleleneyo nabanye. Ukuba ubuntu bomfazi bunxulunyaniswa nobumnandi bukwathandwa kakhulu. Hlala unxibelelana naloo ndoda, thetha nayo, ncuma kwaye ngaphezu kwakho konke ujabulele ixesha kwaye wonwabe. Konke oku ngaphandle kokunyanzelisa umzuzu kuya kubangela umtsalane omhle.
Ngalo lonke ixesha ujonge ukusondela ukwenza inkwenkwe ithandane
Kufuneke u yenza umdla wakho kunye nokusondela kwakho kuvakale, kodwa ungabonisi kakhulu ukutyumza kwakho okukhulu. Ukuba unomhla kufuneka ube yindalo kwaye ulandele intambo yengxoxo, nikela ingqalelo kwinto eyithethayo kwaye bonisa yonke inkxaso yakho. Kuya kufuneka wenze indawo ezolileyo apho kufuneka uzive ukhululekile. Ungazibonisi okanye umenze abone yonke imimangaliso onayo, ukwenza i-halo yemfihlakalo kuya kudala umdla.
Ukuze wenze umtsalane omncinci, kuya kufuneka ubonise ukuba incoko yakho ayingobuhlobo nje. Uya kumyeka awe loo nto unayo enye into enomdla ngala ma-nuances amancinci ukungqina oko. Ukuqhagamshelana nomzimba kusebenza kwakhona, Kodwa ungakhe ulinge uyibambe kakhulu kuba kukho amadoda alandulayo.
Sebenzisa ubuchule besipili ukuze kubekho umtsalane. Ukuba loo nkwenkwe ibona ukuba wenza izimbo zomzimba ezifanayo, uziphatha ngendlela efanayo, unenkxalabo okanye iimvakalelo ezifanayo ... ingqalelo kunye nomdla ukuba umfazi. Kodwa kufuneka uqaphele ngalo mba, unokuba kufutshane naloo mntu, kodwa ungadali ubuntu obubuxoki. Oko kuya kufunyanwa ekugqibeleni.
Bonisa okwakho ukuzimela
Leyo yinkcukacha oyithanda kakhulu kwaye inokudala umtsalane omkhulu. Ungabonisa umdla wakho emadodeni, kodwa sukubonisa uncamathiselo lwakho. Kukho abafazi abaxhomekeke kumdla othile kunye nokudibanisa ukuze bazive bezalisekile. Kodwa kude ngaphaya kwale nyani, amadoda akhetha abafazi ababonakaliswe ngu yomelela kwaye uzimele.
Ukuze ukwazi ukubonisa ukuba ukuzimela kufuneka ukuve, dala obakho ubomi kwaye wonwabe ungaxhomekekanga mntwini. Ungasoloko umkhangela, mvumele naye akukhangele kwaye awusoloko ufumaneka nanini na. Kufuneka kwakhona bacwangcise izicwangciso kunye nosapho kunye nabahlobo kwaye bala nasiphi na isimemo kuba unobomi bakho. Zonke ezi nkcukacha, nokuba azibonakali ngathi, zibala kakhulu.
Fumana kancinane ngobuntu babo
Le yinkcukacha emnandi yokwenza ukuba ixesha kunye libenokwabelwana ngalo ngomdla omkhulu. Ukuba ufumanisa ukuba zinjani iincasa zabo, izinto ozithandayo, umsebenzi wakho, iinkxalabo zakho ... konke oku kunokuba luncedo olukhulu kuwe. Kodwa ukwazi kufuneka umamele nje, ngamaxesha onke mvumele athethe ngaye kwaye azive ekhatshwa.
Kwaye ngaphezu kwakho konke ukuze ukwazi ukuyithatha kangangoko kunokwenzeka, Sukuthi phithi. Kufuneka uphumule kwaye uvumele yonke into ihambe ngokuqhelekileyo kwaye ngaphandle kokukhawuleza. Amanye amadoda kufuneka anikwe ixesha ngoko abaziva becinezelekile, okanye ndisindwa yimeko. Yenza kwaziwe ukuba uyafuna ukuba kunye naye ngaphandle kokunyanzelisa nantoni na, ukuba uyonwabele inkampani yabo kwaye ngaphezu kwakho konke ukuba ube nexesha elimnandi. Ndiyathetha, makhe yonke into ize ngokwemvelo kwaye wonwabele ixesha kakhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Uyenza njani inkwenkwe ukuba ithande